Lalatiana sy Andry Rakotondrazafy : Mahatoky ny filohan’ny SMM ? -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana sy Andry Rakotondrazafy : Mahatoky ny filohan’ny SMM ?
27/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mandà tsy mety mamaly ny fiantsoan’ny zandarimaria noho ny raharaha ilàna azy ireo i Lalatiana sy Andry Rakotondrazafy. Fiantsoana fahatelo amin’ny androany, araka ny fantatra no tsy nahitana tohiny. Toa mampahatsiahy ny raharaha Claudine mihitsy izao zava-misy izao. Raha tsaroantsika tsara mantsy, dia isan’ireo nivoy mafy ny fampidirana am-ponja ity mpandraharaha iray ity i Lalatiana sy Andry Rakotondrazafy sy ny gazety Freenews, ary nanome tanana tanteraka ny filohan’ny SMM nandritra ireny fihetsika nampitondra henatra ny fianakaviamben’ny Mpitsara ireny.
Tsy niafina teo anatrehan’ny vahoaka sy ny mpanara-baovao mihitsy moa izay fifandraisana akaiky eo amin’i Lalatiana sy Andry Rakotondrazafy ary ny filohan’ny SMM izay, ary nasehon’izy ireo ho fanta-bahoaka tamin’ny alalan’ireny tambazotra sy facebook ireny ny sary maneho ny fiarahana ivelan’ny asa. Koa mahatoky ny filohan’ny SMM àry ve izany izy mivady ireto matoa sahy manao tsinontsinona ny mpitandro filaminana tahaka izao? Sa miandry ny mpitandro filaminana handray fanapahan-kevitra hisambotra mba hiampangana ny fanjakana?